Maxaa lagu arki Madrid hal maalin gudaheed | Wararka Safarka
Maxaa lagu arki Madrid hal maalin gudaheed
Mariela Carril | | Madrid, Maxaa la arkaa
Ma ku baran kartaa magaalo hal maalin gudaheed? Dabcan maaha, ama ugu yaraan ma ogaan kartid si buuxda iyo sida ay magaaladu u qalanto ... laakiin waxaa jira waqtiyo aysan jirin waddo kale oo ay tahay inaad ogaato sida looga faa'iidaysto saacadahaas.
Madrid hal maalin gudaheed... ka waran?
Madrid 24 saac gudahood
Ma ku dhamaatay Madrid si uun oo kaliya hal maalin oo aad ku sameyso dhawr wareeg? Maxaad ku ogaan kartaa waqti yar gudaheed? Sideed uga heli kartaa waxa ugu fiican? Way fududahay, dooro kaliya jiidashada ugu caansan.
Waxaa laga yaabaa inaad ka timaaddo gudaha dalka, waddan jaar ah ama dhinaca kale ee Atlantic, dhib ma laha, laakiin waa inaad heshaa Multi Card in loo isticmaalo tareenada dhulka hoostiisa mara si loo helo gaadiid degdeg ah. Xisaabi inaad ku qaadato 24 saacadood caasimadda Isbaanishka waxaad u baahan doontaa ugu yaraan laba tigidh, haddii aad timaaddo Barajas (mid dibadda ah iyo mid ku soo laabtay garoonka diyaaradaha), laakiin taasi waa inaad ku dartaa laba kale si aad u hesho soo jiidashada Madrid si degdeg ah. .
Waxaa jira 12 khadadka metro ee Madrid, marka lagu daro basaska, tareenada iyo khadadka taraamka, laakiin si loo fududeeyo, metro waa ku haboon yahay sababtoo ah gaadiidkani wuxuu si fiican u xiraa meelaha ugu caansan. iska cad, haddi aanad mar walba socon karin.
Bartamaha magaalada waa Puerta del Sol, sidaas darteed haddii aad joogtid garoonka diyaaradaha waxaad isticmaali kartaa shabakadda metro pink, 8, si aad u aado Nuevos Ministerios. Halkan ka qaad khadka buluuga ah ee dhanka Puerta del Sol oo ka deg Maxkamadda. Halkaa waxa aad ka bedeshaa xariiqda jannada, 1-da, ugu dambayntiina waxaad hoos ugu dhaadhacdaa Sol taas Waa meel aad u wanaagsan inaad booqato meesha ugu fiican Madrid hal maalin gudaheed. Guud ahaan waxay noqon doontaa safar nus saac ah.
Waxaa ugufiican ku bilow socod dhex mara xarunta taariikhiga ahWaa muuqaal aad u wanaagsan oo ku saabsan magaalada iyo taariikhdeeda. Gudaha Plaza Mayor, maalin kasta, waxaa jira sida caadiga ah hagayaal leh dalladaha cadcad kuwaas oo ururinaya oo hagaya dalxiisayaasha, labadaba Isbaanishka iyo Ingiriisiga.
Noocyadan dalxiisku waxay socdaan ilaa saddex saacadood iyo co Waxaad arki doontaa Duqa Plaza, Mercado de San Miguel, Gran Vía, Almudena Cathedral, Convent of the Carboneras Sisters iyo Puerta del Sol.
Waxaad samayn kartaa boos qabsi wakhti adiga kugu habboon ama waxa aad iman kartaa oo aad ku biiri kartaa kooxda la samaynayo. Waa dalxiis bilaash ah, laakiin deeqaha waa la aqbalayaa waana la filayaa. Haddii aad rabto in badan oo ka mid ah socodka habaysan ee noocan ah, kaliya tag wakaaladda dalxiiska. Xitaa waxaad kiraysan kartaa a Safarka Segway ama socod taariikheed gaar ah. Oo haddii aanad jeclayn inaad la joogto hagayaasha oo aad rabto inaad dabacsanaato, markaa waxaad mar walba samayn kartaa jidkaaga.
Maskaxda Ku hay Ha seegin Matxafka Prado, Park Retiro, Neptune Fountain, Sainte Jerome Cathedral, ka Plaza del Ángel iyo Casa de Cisneros. intaa aan kor ku soo xusay. Khariidadda dalxiiska ee wanaagsan dhib kuma yeelan doontid. Dabcan, dariiqu wuxuu ugu dambeyntii ku xiran yahay dhadhankaaga.
Tusaale ahaan, Ma jeceshahay fanka Markaas ayuu Museo del Prado, Reina Sofia iyo Thyssen-Bornemisza waxay noqon doonaan haa ama haa liiskaaga. Waxay xoogga saaraan farshaxanka ugu fiican halkan Madrid, laakiin ma heli doontid wakhti aad ku aragto dhammaantood eeg ururinta aadka u xiisaynayso oo go'aanso. Qaar badan ayaa dooranaya Reina Sofia sababtoo ah halkan waa Guernica caanka ah ee Picasso, laakiin haddii aad rabto wax guud oo guud, Matxafka Prado waa doorashada ugu fiican.
Matxafyada booqashadu waxay daadiyaan tamarta, waa run, markaa haddii aad doorbidayso inaad ka tagto farshaxanka wareeg kale oo cimiladu waa wacan tahay, way fiicantahay inaad dibadda joogto. Taas awgeed waad awoodaa ka gudub Paseo del Prado oo arag Beerta Retiro iyo kaniisada boqortooyada. Haddii aad hore u ogeyd waxaad samaynayso, waxaa jira tigidho badan oo aad horay u iibsan karto.
Plaza Mayor waa xeebta ugu weyn waana meel aanad hal maalin ku waayi karin Madrid. Waa leydi, oo ay ku hareereysan yihiin dhismayaal qurux badan, oo leh in ka badan 200 balakoon, oo leh taallada King Felipe III ee 1616… meel kasta oo aad eegto, waxay leedahay soo jiidasho. Waxaa jira sagaal albaab oo qardaran, oo hore albaabbada u ahaa qarniyadii dhexe, balse maanta waxaa ku yaal maqaayado laga soo galo oo laga soo fiirsado waddooyinka goglan ee xarunta.
Inta u dhaxaysa laba munaarad waxaa jira fresco cajiib ah, Casa de la Panadería, oo leh ilaahadda Cibeles ee guurkeeda Attis, iyo sidoo kale faahfaahin dheeraad ah oo u taagan taariikhda magaalada. Haddii wakhtigan socodku uu yahay duhurkii markaas waxa fiican in la fadhiisto wax yar ka cun tapas Mercado San Miguel Hagaag, jawiga halkan waa kan ugu fiican. Iyadoo ay jiraan suuqyo kale oo ku yaala caasimadda Spain arrimaha gastronomic tan waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican.
Shukaansiga laga soo bilaabo 1916, waa dhisme ay birta ka adkaato runtuna waxay tahay in ay bixiso wax kasta oo kalluun cusub ilaa shukulaatada wanaagsan. Iyo dabcan, ham ugu fiican. Puerta del Sol waa kiiloomitir 0 ee Spain waxayna ahayd mid ka mid ah albaabadii ugu muhiimsanaa ee Madrid hore qarnigii XNUMX-aad. Maanta waa barxad aad u firfircoon oo leh taallo iyo dhismayaal badan oo muhiim ah.
Sawir wanaagsan ayaa ag yaal jaakada hubka ee magaalada, Beerka iyo Geedka Strawberry, oo ka baxsan albaabka laga galo tareenka dhulka hoostiisa mara. Laga soo bilaabo isla halkan waad awoodaa u soo dhaadhac Duqa Magaalada Calle oo ku wajahan webiga oo dhex mara Masraxa Royal, Qasriga Boqortooyada iyo Cathedral Almudena.
Sida iska cad ma heli doontid wakhti aad ku qadariso gudaha quruxdeeda laakiin ku hubso in dibadda ay sidoo kale yihiin kuwo cajiib ah. Marka la eego Gran Vía Waxay xoogga saartaa noocyada caanka ah ee ugu caansan, laakiin haddii aad rabto wax ka badan boutique waxaad aadi kartaa xaafadaha Chueca iyo Malasaña, oo leh jidadkooda yaryar iyo dukaamada yaryar.
Markaad socdaalkan samaysay, runtu waxay tahay inaad ku qaadanayso qayb badan oo maalinta ah, xisaabinta wakhtiga quraacda iyo qadada iyo sababta aadan u cabbin kafeega bartamaha galabtii oo aad nasato lugahaaga. Qiyaastii 7 ama 8 waa inaad sidoo kale istaagtaa qorrax dhaca ku raaxee. Aragtida muuqaalka ee Gran Vía iyo dhismaha Metropole ee ka soo baxa madaxa madaxa waa wax cajiib ah waxayna noqon doontaa macsalaamaynta ugu fican Madrid.
Madaxu wuxuu saaran yahay saqafka sare ee Círculo de Bellas Artes, todoba dabaq oo sarreeya, oo leh baarka iyo makhaayadda 360 ° magaalada aragtida, ama ugu yaraan xarunteeda soo jiidashada iyo xiisaha leh ee taariikhiga ah. Cabbitaannada ma aha kuwo raqiis ah, si cad, laakiin shaki la'aan Waa xiritaanka ugu fiican ee 24 saacadood gudaha Madrid. Ma ka shallayn doontid.
Kadibna haa, waad joogi kartaa si aad wax u cunto ama haddii ay qaali tahay waxaad u dhaadhacdaa wadada oo waxaad u baxdaa tapas. Xaafad u wanaagsan taas waa Huertas, oo leh Casa Alberto ama La Venencia. Ugu dambayn, habeen ma leedahay mise ma haysatid? Haddii aad haysato habeen aad ku raaxaysato markaas waxaad u bixi kartaa qoob-ka-ciyaarka, haddii aadan raacin baararka taas oo ah madadaalo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Madrid » Maxaa lagu arki Madrid hal maalin gudaheed
Lanzarote: waxa la arko